Huawei OLT Vagadziri | China Huawei OLT Fekitori & Vatengesi
32 Zviteshi zve EDFA
Huawei GPFD Service Board iri 16-chiteshi GPON OLT interface bhodhi neB + kana C + SFP module yeHuawei MA5608T MA5683T MA5680T
Huawei GPFD Service Board ndeye 16 chiteshi GPON interface kadhi Iri bhodhi rinopa GPON sevhisi yekuwana kubva kuOT iyo inowana yakawanda yekuwana 16 * 128 GPON vanyori. Iyo OLT chigadzirwa chakamisikidzwa seye optical access kifaa OLT, iyo inotsigira GPON, 10G GPON, EPON, 10G EPON, uye P2P nzira dzekuwana, uye inopa masevhisi akadai seInternet kuwana, izwi, uye vhidhiyo. Seyakakura, yepakati uye diki nhevedzano yezvigadzirwa, zvigadzirwa zvinoverengeka zvine huwandu hwesoftware mapuratifomu uye mabhodhi ebasa.
SmartAX MA5680T / MA5683T / MA5608T michina ndeye GPON / EPON yakasanganiswa yekuwana chigadzirwa chigadzirwa chakatangwa neHuawei Technologies Co, Ltd. Ine ultra-high aggregation switching capacity, 3.2T backplane capacity, 960G switching capacity, 512K MAC kero inokwanisa, uye inotsigira anosvika makumi mana nemana mageji e10 GE kana 768 GE kuwana. Iyo software shanduro yezvinhu zvitatu zvinowirirana zvakazara nemushandisi bhodhi, kuchengetedza mhando uye huwandu hwezvipenga zvikamu uye kudzikisa mari yekuchengetedza.
8 16 32 PON Ports OLT Mini Optical Line Terminal michina SmartAX MA5608T
Iyo MA5608T Mini OLT yakagadzirirwa kugadzirisa Fibre kumberi (FTTP) kana yakadzika fiber kuendesa zviitiko uko hombe OLT
chassis inogona kunge isiri iyo yakanyanya kukodzera kune akasiyana zvikonzero. Huawei's mini OLT MA5608T yakagadzirirwa kuve yakakwana mukwanisi wayo
mamwe MA5600 akateedzana akakura OLTs uye inopa iwo akafanana anotakura giredhi maficha uye mashandiro.
MA5608T's compact uye yekumberi yekuwana dhizaini inoita kuti ive mhinduro yakanaka yekutumirwa munzvimbo dzakaita senzvimbo dzakamanikidzwa dzimba,
makabati ekunze kana dzimba dzepasi pekuvaka. Iyo ine AC uye DC magetsi emagetsi, yakawedzera tembiricha renji, uye inopa nyore kumisikidza.
Yakagadzirirwa kutsigira inogara ichiwedzera bandwidth kudiwa, MA5608T ine 200 Gbps backplane. Iko kusanganiswa kweiyo yepamusoro-chinzvimbo
uye mitsara inopindirana neyakanakisa-mu-kirasi kuita inobvumidza iwo anoshanda kuendesa huwandu hweshumiro yemari yakawanda kwazvo
yemakwikwi mutengo poindi.
Iyo MA5608T inogovera zvakafanana chigadzirwa chivakwa neiyo MA5600 akateedzana OLTs kubvumidza isina musono network kukura.
Stock Roti Yekutanga huawei ma5680t gpon olt technical specs huawei ma5680 olt
Iwo SmartAX MA5680T akateedzana anovandudzwa zvichibva pachikamu chechitatu cheHuawei chakabatana uye ndiyo yekutanga kuunganidzwa OLTs pasi rose. Iyo MA5680T nhepfenyuro inosanganisa iyo aggregation uye switching mabasa, inopa iyo yakakwira-densityxPON, Ethernet P2P, uye GE / 10GE madoko, uye inopa iyo TDM uye Ethernet yakazvimirira mitsara masevhisi neakanyanya wachi chaiyo kutsigira inotsvedzerera yeInternet kuwana sevhisi, vhidhiyo sevhisi, izwi revhisi. , uye yepamusoro-yakavimbika sevhisi kuwana. Iyi nhepfenyuro inovandudza kuvimbika kwenetiweki, inoderedza mari mukuvakwa kwenetiweki, uye inoderedza mutengo weO & M.
Iyo MA5680T yakateedzana inosanganisira hombe-inokwana SmartAX MA5680T uye yepakati-kugona SmartAX MA5683T. Iyo Hardware uye software yemhando mbiri idzi zvinowirirana zvakazara nemumwe kudzikisa mutengo wezvinhu kugadzirira kunetiweki. Mune aya maviri mamodheru, iyo SmartAX MA5680T inopa 16 sevhisi yekushandira uye iyo SmartAX MA5683T inopa 6 sevhisi slots.
MA5800 Series OLT Optical Line Terminal SmartAX MA5800 MA5800-X2 kubva kuHuawei
Iyo MA5800 furemu-yakaumbwa dzakateedzana inowanikwa mumatatu mamodheru: MA5800-X17, MA5800-X7, uye MA5800-X2. Izvo zvinoshanda muFTTB, FTTC, FTTD, FTTH, uye D-CCAP network. Iyo 1 U bhokisi-rakaumbwa OLT MA5801 rinoshanda kune ese-optical mukana wekuvhara munzvimbo dzakaderera-nzvimbo.
Huawei SmartAX MA5800-X7 Multi-sevhisi Yekuwana Series OLT
Optical Mutsetse Terminal Huawei SmartAX 5800 OLT MA5800-X15 GPON
Inotungamirwa nepasirese fiber kuwana shanduko yekuchinja, Huawei chinotevera-chizvarwa OLT chikuva chinogadziridzwa mukubatana nevatengi vedu. Iyo MA5800 yakateedzana ye OLT ndiyo yazvino uye yepamberi OLT chikuva muindastiri. Iyo yakagadzirirwa kutsigira kuenderera mberi kwekukura mune bandwidth kudiwa, waya-mutsetse uye isina waya yekuwana kusangana, uye kutamira kune SDN.
Iyo indasitiri yekutanga 40 Gbit / s-kugona Inotevera-Generation Optical Line Terminal (NG-OLT). Huawei's SmartAX MA5800 yakawanda-sevhisi yekuwana module inoshandisa yakavakirwa yekuvakira kutsigira ultra-Broadband, Fixed Mobile Convergence (FMC) masevhisi, uye kugona kwakangwara, senge SDN-based virtualization.
MA5800's programmable Network Processor (NP) chip set inomhanyisa kuburitswa kwemasevhisi matsva, kupa kune chinodikanwa chemasevhisi akasiyaniswa, kusanganisira kupatsanura kwevazhinji uye vatengesi vevashandi.
Huawei Fekitori Yakananga Kutengesa Huawei GPON OLT MA5683T
SmartAX MA5683T ndeyeGigabit Passive Optical Network (GPON) yakasanganiswa yekuwana chigadzirwa chigadzirwa.
Iyi nhepfenyuro inoratidzira iyo indasitiri yekutanga kuunganidzwa Optical Line Terminal (OLT), inosanganisa Ultra-yakakwira kuwanda uye nekuchinja kugona, inotsigira 3.2T backplane kugona, 960G switching kugona, 512K MAC kero, uye yakakwira ye44-chiteshi 10 GE kuwana kana 768 GE zviteshi.
Yakaderera Kushanda uye Kugadzirisa (O&M) inodhura nesoftware shanduro dzese matatu mamodheru anowirirana zvizere nemabhodhi ebasa, uye inoderedza huwandu hwesitoko hunodiwa pazvipenga zvikamu.
Huawei GPSF Service Board neB + C + C ++ SFP
Huawei MA5800-X2, MA5800-X7, MA5800-X15, MA5800-X17 16-chiteshi GPON OLT inowanikwa Bhodhi
GPSF ndiyo inotengesa zvakanyanya GPON Service Board yeHuawei MA5800 Series OLT
Huawei 16-GPON Port inowanikwa Kadhi neB + / C + / C ++ SFP module
Tsigira kupatsanurwa ration 1: 128
Fambisa Speed: 2.488Gbit / s, Gamuchira Kumhanya: 1.244Gbit / s
Yekutaura Rudzi: SC / PC
Huawei GPON OLT GPUF C ++ bhodhi rebasa
GPUF ndiyo inotengesa zvakanyanya GPON Service Board yeHuawei MA5800 Series OLT
Max Kufambisa Kure: 20KM
Yekutanga Huawei 50A 100A Rectifier ETP48100-B1 220V-48V OLT Kutaurirana Simba Rinoshandura Simba Rinopa
ETP48100-B1 OLT Simba rekushandisa
ETP48100-B1-50A inotakura-kirasi AC kune DC simba inoshandura, shandura 220V / 110V AC simba ku -48V DC simba, MAX kuburitsa 50A. ETP48100-B1-50A vane zvina zvinobuda, yega yega MAX kuburitsa 25A; Kana ukabvunzwa nemaviri R4850G2, zvabuda zvese zvinogona kuve 100A.
Iyi PSU inopihwa neimwe PSU R4850G2 inogadzirisa module ichipa 53.5V / 50A kuburitsa, PMU 11A yekutarisa module uye yemahara slot yekuisa imwe module uye simba rinosvika 100A.
Huawei MA5800T GPHF C + C ++ 16 chiteshi GPON Service Board Kadhi
GPHF ndiyo inonyanya kutengesa GPON Service Board yeHuawei MA5800 Series OLT
Sfp C ++, Xfp Transceiver, Huawei Olt Mutengo, Optical Fiber Module, External Modulation Transmitter, Huawei Qsfp +,